တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူခြေနင်းဝတ်ဆင်ပါနဲ့ - မှောင်မိုက်အလင်း, အနက်ရောင်, အရောင်, နိုင်လွန်, ပိုက်ကွန်ထဲမှာ pantyhose - တစ်ဦးဖိနပ်နှင့်အတူရှိနိုင်ပြီးဝတ်ဆင်မရနိုငျသောအရာကိုနှင့်အတူ
တစ်ဦးစတိုင်ပုံရိပ်နှင့်အမြင် stylist ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ - ခြေအိတ်နှင့်အတူခြေနင်း
ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်တရားမျှတစွာအစွန်းရောက်ဟုခေါ်တွင်စေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, စတိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတိကျတဲ့နှင့်ကန့်သတ်ကြသည်။ အချို့သော ensembles တားမြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမညီကြောင်းရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ stylist မကြာခဏအများကြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံထုတ်ပေးကြောင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်။ ထိုတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနဲ့ Duet ခြေနင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤမေးခွန်းကို unsolvable အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မည်မျှလူများ, ဤမျှလောက်များစွာသောထင်မြင်ယူဆ။ သို့သော်ဒီဇိုင်နာများ၏အကြံပေးချက်ကိုမှီခိုသူတို့ထဲကအတော်များများထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ခွင့်ပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖက်ရှင်ဝေဖန်ရေးနှင့် stylist လူသိများခြေနင်း Evelina Khromchenko နှင့်အတူတင်းကျပ်စွာ, သေံအတွက်ကောက်ပေးထားပါတယ်။ အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုကို accessories များရုံရွေးချယ်မှုပေးဆောင်ရပါမည်။ Khromtchenko ဒီဒြပ်စင်တတ်နိုင်သမျှမြင်နိုင်နှင့်ပိတ်ထားသောဖိနပ်မဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ သို့သော်သူမအတွက်အပြင်ပန်း၏ကြော့ရှင်းများနှင့်သဟဇာတမငြင်းပါဘူး အနက်ရောင်ပါးလွှာတင်းကျပ်စွာ လည်းအမြင်အာရုံရှည်ကြီးထွားနေသော။
ခြေအိတ် 2017 နှင့်အတူခြေနင်း
အနည်းငယ်ရာသီလွန်ခဲ့ခြွင်းချက်မရှိ mauvais တစ်တန်ကိုခေါ်ခဲ့ကွောငျးကိုကွောကျရှံ့ပြပွဲတီးဝိုင်းမရှိဘဲယခုနှစ်တွင်ဖက်ရှင်ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ။ တချို့ကဒီဇိုင်နာများက၎င်း၏ collection များကိုထိုကဲ့သို့သောလမ်းဖန်တီးမှုနှင့်မူရင်းဖေါ်ပြခြင်းနေကြသည်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစင်မြင့်နေ့စဉ်ဘဝကနေကွဲပြားခြားနားသည်ကိုငါသိ၏။ ခြေနင်းဘို့တင်းကျပ်စွာသင့်လျော်သောအခါဒါ stylist တိကျတဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသတ်မှတ်ထားသော:
အရောင်တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူခြေနင်း။ ထွန်းတောက်မျက်စိ-ဖမ်းစတိုင်နှင့်ပုံရိပ်ကိုဖြေရှင်းချက်များအရေးတကြီးပေးထားသောတစ်ဦးဖိနပ်များ၏ခြားနားသောအရောင်အဆင်းအတွက်စတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဓိကထားမူရင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည် တဦးချင်း ။
တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူခြေနင်းပိတ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်နှစ်ခုအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ပထမဦးဆုံး၌ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူနွေရာသီဖိနပ်များ၏ Compatibility ကို၏အငြင်းပွားဖွယ်ဘာသာရပ်နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, မော်ဒယ်များတင်းကျပ်စွာ၏ပြီးစီးဖြည့်စွတ်ခွင့်ပြု, ဖိနပ်များ၏အမျိုးအစားမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်ပိတ်လိုက်တယ်။
patterned တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူခြေနင်း။ သင်တစ်ဦးတီးဝိုင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီလျှင်, ထုတ်၏ရွှဲနှင့်အရောင်အဝါ overdo ပါဘူး။ ပုံစံ textured သို့မဟုတ်ဖောင်းကြွပါလိမ့်မည်ဆိုပါက၎င်းသည် သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာဖိနပ်မှကိုက်ညီရန်ဤလေးကိုစကတ်သို့မဟုတ်စားဆင်ယင်ဖြည့်စွက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
လူအနည်းငယ်ကသာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပွင့်လင်းနွေရာသီဖိနပ်များ၏စိတ်ကူးပေါင်းစပ်ဖို့စိတ်ထဲထံသို့လာကြ၏။ သို့သော် kapron ခြေအိတ်နှင့်အတူမရှိဝတ်ထားခြေနင်း၏မေးခွန်းကို, အနာဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာသင်သွားမယ့်ဘယ်မှာနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ တင်းကျပ်သော mode ကိုပွင့်လင်းခြေချောင်းခွင့်ပြုမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြက်သွန်နီ Creating, accessories များအသုံးပြုခြင်း, မလွှဲမရှောင်ကြလိမ့်မည်။ ရောနှောထားသော ensemble ကြိုဆိုတီထွင်ဖန်တီးမှုအလေးပေးဖို့ဘယ်မှာပင်နှစ်လိုဖွယ်ကလပ်-စတိုင်။ ညဦးနှင့်ကြက်သွန်နီအတွက်စိတ်ကူးစွန့်ခွာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွင့်ခြေနင်းများနှင့် pantyhose လောကဝတ်ဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြကုန်အံ့:
ဇာ openwork နှင့်အတူ tights ။ တစ်ဦးဇာပုံစံသို့မဟုတ် abstraction နှင့်အတူအလွန်ဣတ္နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကြည့်မော်ဒယ်။ သို့သော်ဤအမှု၌ကြောင့်ရွှဲမဆိုထူးခွားသညျ့နှင့်အရိပ်ကိုရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးပါသည်။
Bodywork အရောင်များ။ တစ်ဦးက Win-Win option ကိုအသားအရေအရောင်အားဖြင့်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိနပ်တစ်တံခါးပိတ်ခြေချောင်းရှိပါတယ်လျှင်, အဘယ်သူမျှမကသင်၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
ချုပ်ရိုးမရှိဘဲတင်းကျပ်စွာနှင့်အတူခြေနင်း။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထူထပ်သောချုပ်ရိုးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လယ်ပြင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းငြိမ်ပါလိမ့်မယ် အကယ်. အကူးအပြောင်း၏မှောင်မိုက်တီးဝိုင်းရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုအရသာမရှိခြင်းကိုအလေးပေးဖို့သေချာပါသည်။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်း-piece အမော်ဒယ်များနှင့် monochromatic ကိုချုံ့ဖို့ကြိုးစားပါ။
မော်ဒန်စတိုင် စမ်းသပ်ဖို့အဆင်သင့်နှင့်အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ensemble ပွင့်လင်းဖိနပ်များနှင့်တင်းကျပ်စွာစေရန်ခိုင်လုံသောဒီဇိုင်နာများမျှမျှတတကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အဖြေတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွင့်လင်းခြေချောင်းတွေနဲ့ခြေနင်းဘို့အအောင်မြင်ဆုံးသံမဏိတင်းကျပ်စွာတစ်ခုမှာ။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များစတိုင်အပေါငျးတို့သစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာ။ စတိုင်၏ပြီးပြည့်စုံသောနာမတော်ဖြင့်လိုအပ်သောအဖြစ်ခြေထောက်, လုနီးပါးရှင်းလင်းသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးအစိုင်အခဲသို့မဟုတ်အရောင်အရိပ်တစ်ခု option ကိုဖွင့်ကောက်လျှင်, အဘယ်သူမျှမသင်ပိုမိုအသေးစိတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် ensemble အေးမြညနေခင်းနွေးကာလအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် ensemble အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ခြေနင်းနှင့်အတူဤရွေ့ကားကြပ်, stylist သည်နှင့်အညီ, ဿုံနောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုက်ညီနှင့်လိုက်ဖက်စွာနှင့်ဣတ္အတူတကွကြည့်ရှုပါ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့နွေရာသီဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အသွင်မြင်လာအောင်ကိုချိုးဖျက်ကကူညီပေးခဲ့သောအဓိကအားသာချက်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြည့်စွက်မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝအလှဆင်ထားပါတယ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဆိုလိုတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဇယားကွက်မတိုက်ဆိုင်ပေါင်းစပ်များအတွက်စတိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါကတင်းကျပ်စွာ၏ထိပ်ပေါ်မှာထားရန်ထိုက်သည်။
Evelina Khromchenko အကောင်းဆုံးဤ option ကိုအသိအမှတ်ပြုမသာ။ ခြေနင်းအောက်တွင်အနက်ရောင်နိုင်လွန်ခြေအိတ်မကြာခဏ Low-key ကိုစီးပွားရေးနှင့်ရုံးခန်းလေးတှငျတှေ့နေကြသည်။ အဆိုပါနှစ်လုံးကိုအပြည့်အဝခြေထောက်နှင့်အတူဖက်ရှင်အဘို့ကြီးစွာသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းဂန္မှောင်မိုက်အရိပ်ရှည်များနှင့်ပါးလွှာခြေထောက်ပြီးနောက်။ stylist monochromatic ပေါင်းစပ်နှင့်ဆန့်ကျင်စတိုင်လ်ဝန်ခံ။ တင်းကျပ်စွာပွင့်လင်းပါးလွှာနှင့်နိုင်ပါတယ် သိပ်သည်း ။ တောင်မှသင် understeer ပုံစံသို့မဟုတ်ရေတိမ်ပိုင်း abstraction နှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖြည့်စွက်ခြေထောက်ဟာဗီရိုအကူးအပြောင်းနှင့်အအေးကာလ၏ဒြပ်စင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်, ပွင့်လင်းပြီးစီးမကြာခဏဖျောပွအစိတ်အပိုင်းများရဲ့ style မကိုက်ညီအဖြစ်မိုကြည့်ရှုပါ။ သို့သော်ခြွင်းချက်မရှိသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦး ensemble ဖန်တီးအခါစတိုင်ဒါပေမယ့်လည်းတင်းကျပ်စွာနှင့်ဖိနပ်အရောင်မသာစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှု stylist ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ယုံကြည်:
ဂန္ထဝင်ဖိနပ်။ ဖနောငျ့နဲ့ခြေချောင်းဖုံးအုပ်မော်ဒယ်များ, kapron, lurex, ဝါးနှင့်ဝါဂွမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အကြီးကြည့်ပါ။ ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းလင်းစွာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှညီ။
ပိတ်ထားသောဘွတ်ဖိနပ်။ ဖိနပ်၏ဤအမျိုးအစားအထူးသဖြင့်မိုးရာသီနှင့်ရှိအေးမြသောဆောင်းဦးရာသီရာသီဥတုအခြားကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စဉ်းစားသည်။ လုံးဝခြေဖုံးအုပ်မော်ဒယ်များတစ်ဦးခြားနားအရောင်နှင့်တသားတအရိပ်သို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖိနပ်နှင့် Sneaker ။ Kezhualnoe ပြီးစီးစံပြထူးခြားသောစတိုင်မြို့ပြလေး။ ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကြိုဆိုဖြစ်ပါတယ် အရောင်တင်းကျပ်စွာ နှင့်တစ်ဦးပုံစံ, ပုံစံနှင့်အခြားလျနှင့်အတူတစ်မူကွဲ။
ပြီးသားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဗားရှင်းတစ်ခု universal ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပွင့်လင်းပြီးမြောက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ထားသောဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စားဆင်ယင်ကုဒ်အတိုင်းလိုက်နာမထားဘူးဆိုရင်, သင် ensemble အနက်ရောင်တင်းကျပ်စွာနှင့်တောက်ပဖိနပ်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ စတိုင်နှင့်ရင်ခုန်စရာလေးကိုဖြည့်စွတ်ကလပ်မှထိုသို့သောဆနျ့ကငျြဘဖြေရှင်းချက်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပုံရိပ်တွေပိုကောင်းလွင်ပြင်၏ပေါင်းစပ်ကိုဆီးတားခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေကွက်သို့မဟုတ်သတိပညာ openwork ပုံစံကိုက်ညီသည်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောနှစ်လုံးကိုအပေါ်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်ဂရုတစိုက် stylist ၏ထောက်ခံချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ ထိပ်အစိတ်အပိုင်းပြီးစီးနဲ့တူညီအရောင်အသွေးရှိပြီးဘယ်မှာပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလက်ခံနိုင်သောမှောင်မိုက်တင်းကျပ်စွာနှင့်အတူအလင်းကိုဖိနပ်။ အဆိုပါသေံကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, သို့သော် palette ကိုယ်တိုင်ကလေးစားရပါမည်။ သင်တစ်ဦးနွေရာသီညနပေိုငျးသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော ensemble နှင့်အတူလေးကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်, တစ်ဦးအလင်းစားဆင်ယင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ကြိမ်အစုတခု, အ bolero သို့မဟုတ်အငူထည့်ပါ။ ဤသည်မှာရှေးခယျြမှုလိုက်ဖက်စွာအပေါငျးတို့သ element တွေကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ရဲ့ဖက်ရှင်များတွင်တင်းကျပ်စွာနှင့်ကြက်သွန်နီကျော်ပေါင်းစပ်ရွေးရန်ဘာသာရပ်အပေါ်တင်းကြပ်သောကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတင်းကျပ်စွာအတူအဲ့ဒီ့ပွင့်လင်းဖိနပ်စဉ်းစားသည်။ အဘယ်အရာကိုဆိုလိုရှင်းလင်းသောခြေချောင်းများနှင့်ဖနောင့်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ပါးလွှာတဲ့ကြိုးနှင့်အတူခြေနင်းများနှင့်အခြားမည်သည့်မျိုးမဆိုအမှု၌ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိနှင့်အတူမကောင်းတဲ့အမူအကျင့်ထိုကဲ့သို့သော ensemble စဉ်းစားသည် သိုးမွှေး သို့မဟုတ်ထိုးပြီးမော်ဒယ်များနံရိုး။ နောက်ထပ်လက်မခံနိုင် option ကိုခုံဖိနပ်များ၏ရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်အခြား backless ဖိနပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်အရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ရှိပါတယ်။
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဘောင်းဘီတိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
5 နေ့စဉ်ပုံရိပ်တွေ - နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့တူကွဲပြားခြားနားဖြစ်သလော
Chanel စတိုင် - ၎င်း၏စင် form မှာတစ်ဦးဂန္
အိမ်တွင် facial rejuvenation - တစ်ဦးအမြန်ရလဒ်
E1442 - အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
ယူရိုပါလိဂ်-Park က, ဂျာမနီ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပေါက် - စျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများယနေ့
သင်္ကေတပြ - အိမျတျော၌နှံကောင်ရောင်
အခါတူးနှင့်မည်သို့ callas သိမ်းထားဖို့?
အစဉ်အမြဲပျော်မွေ့နိုင်အစားအစာ၏ 20 အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံများ
Multivarka အတွက်ကိတ်မုန့် "ပရာ့ဂ်"
Nike ကအမျိုးသမီး Hoodies
ဝမ်းနည်း၏မြင်း - သူတို့ရဲ့လက်နှင့်အရုပ်